एसियाडमा नेपालको प्रदर्शन कस्तो रहला ? | Sagarmatha TVSagarmatha TV एसियाडमा नेपालको प्रदर्शन कस्तो रहला ? | Sagarmatha TV
खेलाडीलाई शुभकामनासहित राष्ट्रपतिद्वारा बिदाई
काठमाडौं । आगामी शनिबारबाट औपचारिक रुपमा उद्घाटन हुने १८ औं संस्करणको एसियाली खेलमा नेपालले ७ खेलबाट पदकको आशा राखेको छ । इन्डोनेसियाको जाकार्ता र पालेङवाङ एसियाड अन्र्तगत फुटबल लगायतका केही खेल गत मंगलबारबाटै शुरु भइसकेका छन् भने अन्य खेलहरु शनिबारबाट शुरु हुनेछन् । प्रतियोगिताका लागि नेपालले सहभागीता जनाएको २९ खेलमध्येका २१ खेलका सहभागी टोली त्यसतर्फ प्रस्थान गरिसकेका छन् भने बाँक ८ खेलका टोली भने प्रस्थानको तयारीमा छन् ।
प्रतियोगिता अन्तर्गत हालसम्म नेपालले दुई संस्करणबाहेक सबै एसियन गेम्समा सहभागिता जनाएको छ । हरेक एसियन गेम्समा नेपालले सहभागिता जनाएपनि त्यो सहभागितामै सीमित बनेको छ । १८ औं संस्करण शुरु हुन लाग्दा नेपालले १५ संस्करणसम्म सहभागिता जनाउदा अहिलेसम्म १ रजत २२ कास्य गरी २३ पदक मात्रै जित्न सफल भएको छ । जुन सहभागिताको आधारमा ज्यादै न्यून हो ।
सन १९५४ मा फिलिपिन्सको मनिलामा र १९६२ मा इन्डोनेशियाको जाकार्तामा भएको प्रतियोगितामा सहभागिता जनाएको थिएन । नेपालले पहिलो एसियाली पदक सन् १९८६ मा दक्षिण कोरियाको सिओलमा भएको संस्करणमा जितेको थियो । त्यसयता नेपालले जम्मा एक रजत र २२ कास्य गरी २३ पदक मात्र हात पारेको छ । नेपाललाई एकमात्र एसियाली रजत पदक जिताउने खेलाडी तेक्वान्दोकी सविता राजभण्डारी हुन् । तेक्वान्दोमा नेपालले १३ कास्य पनि जितेको छ । यस्तै बक्सिङमा ६ र करातेमा तीन कास्य पनि नेपाल भित्रिएको छ ।
इन्डोनेसियाको जाकार्ता र पालेङवाङ एसियाडमा नेपालले यसपटक २९ खेलमा सहभागिता जनाएको छ । जुन अहिलेसम्मकै सर्वाधिक धेरै सहभागिता हो । अघिल्लो संस्करणको एसियाडमा करातेकी विमला तामाङले कास्य पदक जित्दै नेपाललाई पदकविहिन हुनबाट जोगाएकी थिइन् । त्यसअघि चीनको ग्वान्जाउमा भएको संस्करणमा पनि बक्सिङका दिपक महर्जन नेपालका लागि पदक जित्ने एक्ला खेलाडी बनेका थिए । नेपाल एसियाडमा सहभागितामै सीमित बनिरहँदा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) का सदस्य केशव कुमार विष्टले यसपटक २९ खेलमध्ये सात खेलबाट पदक आउने दावी गरेका छन् ।
‘जाकार्ता एसियाड संख्यात्मक हिसावमा ठूलो बनेको छ । तर, यसपटक अन्य एसियाडमा भन्दा पनि पदक संख्यामा वृद्धि हुनेछ ।’ सदस्य सचिव विष्टले बुधबार पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘विगतका एसियाडमा भन्दा यसपटकको एसियाडमा नेपालले राम्रो प्रशिक्षण गर्ने मौका पाएका छन् । २९ मध्ये १९ खेलले वैदेशिक प्रशिक्षणको मौका पाएका छन् । अन्य खेलले पनि नेपालमा राम्रै प्रशिक्षण गरेका छन् । त्यसैले पनि यसपटक पदक संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुनेछ ।’ सदस्य सचिव विष्टले यसपटक मार्सल आर्टस्का खेल (कराँते, तेक्वान्दो, उसु, जुडो), बक्सिङ, प्याराग्लाडिङ र स्केटबोर्डबाट पदकको आशा रहेको बताए ।
यस्तै सदस्य–सचव विष्टले स्वर्ण पदकको अपेक्षा नरहे पनि यसपटक रजतपदक र कास्य जित्न खेलाडीहरु सक्षम रहेको समेत बताए । राखेपले एसियाडको तयारीका लागि सरकारसँग ८ करोड रुपैयाँ माग गरेको थियो । तर सरकारले पाँच करोड निकासा गरेको र बाँकी नपुगेको रकम प्रतियोगितबाट फर्किएपछि निकासा गर्ने आश्वासन दिएको सदस्य सचिब विष्टले बताए ।
एसियाली राष्ट्रको खेलकुदको कुम्भमेला एसियाडमा ४५ राष्ट्रका एघार हजार खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । प्रतियोगितामा नेपालबाट २९ खेलका १८५ खेलाडीले सहभागिता जनाउँदैछन् । जसमध्ये १२९ पुरुष र ५६ महिला खेलाडीले इण्डोनेसियामा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नेछन् । उनीहरुको साथमा ४८ प्रशिक्षक, २४ व्यवस्थापक, २७ अफिसियल र एक जना दोभासे रहेका छन् । सेफ द मिसन समेत रहेका सदस्य सचिब विष्टले खेलाडी र ब्यवस्थापक बाहेक एक सय जना भन्दा बढी नेपाली पदाधिकारी इण्डोनेसिया जाने बताए । यो टोलीमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, नेपाल ओलम्पिक कमिटी, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र पत्रकार रहनेछन् ।
यसैबीच, १८औं एशियाली खेलकुदमा सहभागि हुने सरकारी पदाधिकारी तथा खेलाडीलाई राष्ट्रिय झण्डा प्रदान गर्दै अग्रिम शुभकामनासहित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिदाई गरेकी छन् । राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा उनले इन्डोनेशिया जाने टोलीलाई विदाई गरेकी हुन् । उनले नेपाली टोलीका सेफ द मिसन रहेका राष्ट्रिय खेलकूद परिषद् राखेपका सदस्य सचिब केशबकुमार विष्ट, नेपाल ओलम्पिक कमिटिका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ लगायतलाई राष्ट्रपतिले फूलमाला लगाएर विदाई गरेकी हुन् ।
कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर जान लागेका पदाधिकारीलाई विदाई गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताइन् । उनले नेपालले खेलकूदका माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालले नाम राख्न सफल भएको बताउँदै आगामी प्रतियोगिता पनि सफल हुने विश्वास व्यक्त गरिन् । नेपालले भदौ २ गते उद्घाटन हुने एशियाली खेलकुदमा २९ खेलमा सहभागिता जनाउँदै छ । अधिकांश खेलका खेलाडीहरु इन्डोनेशिया पुगिसकेका छन् भने राष्ट्रपतिले विदाई गरेको पदाधिकारीहरु पनि मंगलबार नै त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका छन् ।
कुन कुनमा सहभागिता ?
नेपालले सहभागिता जनाउनेमध्ये २९ खेलमध्ये २३ वटा खेल जाकर्ता र ६ वटा खेल पालेम्बाङमा खेल्ने छ । आर्चरी, एथलेटिक्स, थ्री अन थ्री बास्केटबल, ब्याडमिन्टन, बक्सिङ, फेन्सिङ, गल्फ, जुडो, कराते, कबड्डी, पौडी, तेक्वान्दो, टेबलटेनिस, भलिबल, भारोत्तोलन, उसु, कुराँस, पेनकेक सिलात, कुस्ती, स्क्वास, साइक्लिङ, फुटबल, प्याराग्लाईडिङ, लनटेनिस, सुटिङ, ट्रयथलन, सेपाकताक्रो, स्पोर्टस क्लाम्बिङ र स्केटबोर्ड रहेका छन् ।